सिउँदोमा सिन्दूर किन लगाउँछन् विवाहित हिन्दू महिला ? | Kendrabindu Nepal Online News
१६ भाद्र २०७६, सोमबार १५:१०
हाम्रा कति धर्मपरम्परा यस्ता छन्, जसलाई हामी जानेर वा नजानेर अनुसरण गरिरहेका छौं । पुर्खाले जे गरे त्यही गर्दै आइएको छ, अरू केही थाहा छैन भन्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यसैले हामीले यसका रहस्य बुझ्नु आवश्यक छ ।
वास्तवमा हामी संस्कार वा परम्परा यसकारण अँगाल्दै आएका छाैँ कि, हाम्रा पितापुर्खाले त्यही गरे । पितापुर्खाले गरेको काम हामीले पनि गर्नुपर्छ । तर, पितापुर्खाले किन त्यस्तो काम गरे रु हामी सोधीखोजी गर्दैनौं । आँखा चिम्लेर हामी पितापुर्खाले गरेको काम अनुसरण गर्छौँ। जब कि पिता पुर्खाले ती संस्कार अघि बढाउनुमा पनि विशेष अर्थ र कारण होलान् । त्यतातिर पनि सोधिखोजी गर्नु आवश्यक छ ।
पूजाआजापछि प्रसाद किन खाइन्छ ? मन्त्र किन उच्चारण गरिन्छ रु कलश किन स्थापना गरिन्छ ? सिउँदोमा सिन्दुर किन राखिन्छ ? जस्ता कुराहरूमा अन्धविश्वास मात्र नभई वैज्ञानिक रहस्य लुकेको छ भनेर दाबी गरिन्छ । के यो सत्य हो त र?
कुनै पनि पूजाआजा सम्पन्न गरेपछि प्रसाद ग्रहण गरिन्छ । अर्थात पूजाआजा गरिरहँदा प्रसाद अनिवार्य रूपमा बनाइन्छ । प्रसाद बनाउँदा चोखोनितोको उल्कै ख्याल राखिन्छ । शुद्धता अपनाउन सक्दो प्रयास गरिन्छ । क्रोधको परित्याग गरेर प्रसाद तयार पारिन्छ ।
प्रसाद दिनु वा प्रसाद ग्रहण गर्नु भनेको एक हिसाबले सर्वशक्तिमान शक्तिप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नु हो ।
गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भनेका छन्, ‘हे मनुष्य । तिमी जे पनि खान्छौ, जति दान दिन्छौ । होम यज्ञ गर्छौ, तप गर्छौ । ती सर्वप्रथम मलाई अर्पित गर ।’ यसरी प्रसादको माध्यमबाट हामी ईश्वरप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्छाैं।
ईश्वर अर्थात सृष्टि । चराचर जगत । अतः यसले सृष्टिप्रति हामी सदैव कृतज्ञ हुनुपर्छ भन्ने संकेत गर्छ । यसका साथै त्यो ईश्वरप्रति आस्थावान हुने भाव पनि हो । त्यसैले प्रसाद अर्पण गर्नुको ठूलो महत्व छ । प्रसाद अर्पण गर्दा सामान्यतः यस्तो मन्त्र पढिन्छ :
त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् । गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ।।
मन्त्र जपमा ठूलो शक्ति हुन्छ भनिन्छ । मन्त्र जप्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने शब्दशक्तिले संकल्प र श्रद्धा बलले द्विगुणित भएर अन्तरिक्षमा व्याप्त ईश्वरीय चेतनासँग सम्पर्क गर्छ । अतः अन्तरंग पिण्ड एवं बहिरंग ब्रह्माण्डले एक अद्भूत शक्ति प्रवाह उत्पन्न गर्छ, जसबाट सिद्धि प्राप्त हुन्छ । शुद्ध मनले शुद्ध शरीरका साथ शुद्ध आसनमा बसेर मन्त्र जप्दा त्यसले अत्यन्त प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ ।
कलश किन स्थापना गरिन्छ ?
धर्मशास्त्रका अनुसार कलश सुख, समृद्धि, वैभव र मंगल कामनाको प्रतीक हो । हाम्रा कुनै पनि पूजाआराधना कलश स्थापनाविना पूर्ण हुँदैनन् ।
कलशलाई नारीको गर्भसँग पनि दाँजिएको छ । त्यसैको प्रतीक मानेर कलशलाई सृष्टिको निरन्तरतासँग जोडेर हेरिन्छ । दुर्गा भगवतीको पूजाअर्चना गर्दा कलश स्थापना अनिवार्य मानिन्छ । हरेक देवीदेवतालाई कलशमै आवाहन गरेर पूजा गर्ने शास्त्रीय विधान छ ।
वास्तवमा मानव शरीरको कल्पना पनि माटोका कलशसँग गरिएको छ । यस शरीररूपी कलशमा प्राणरूपी जल विद्यमान छ । जसरी प्राणविहिन शरीर अशुभ मानिन्छ, त्यसैगरी रित्तो कलश पनि अशुभ हुन्छ । त्यसैले कलशमा दुध, पानी, अन्न आदि भरेर पूजा गरिन्छ ।
कलश किन स्थापना गरिन्छ ?, धर्मशास्त्र, प्रसाद, मन्त्र किन जप गरिन्छ ?, सिउँदो
Prevतीजमा महिला र पुरुष दुवैले ब्रत बस्दा के हुन्छ ? (भिडियोमा)
रवि लामिछाने र अंगुर जिसीविरूद्धको मुद्दा खारेजNext